“Tsy afaka mijanona anaty antoko hanjakan’ny kolikoly aho” hoy Randriamandimbisoa Félix - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Moscou à la manœuvre à Madagascar il y a 1 jour
Eddy Kapuku, nouveau DG, s'installe aux commandes il y a 2 jours
Endettement, financement de l’IEM vu à travers le secteur énergie il y a 2 jours
Un DG pêche en eaux troubles il y a 3 jours
Le récit d'une partie de la soirée il y a 4 jours
Petit guide pour comprendre chaque jour de la Semaine sainte il y a 5 jours
Vonon-kiaro ny Lalampanorenana ary miantso ny mpifidy handray anjara il y a 5 jours
1 003 catéchistes du synode regional Sud-Est seront affiliés à la CNaPS il y a 5 jours
“Tsy afaka mijanona anaty antoko hanjakan’ny kolikoly aho” hoy Randriamandimbisoa Félix il y a 6 jours
Rakotoson il y a 6 jours
Iray amin’ireo kandida milatsaka amin’izao fifidianana depioten’i Madagasikara i Randriamandimbisoa Félix Marie Louis Raha ny anarany dia nifamatotra hatrany tamin’ny antoko TIM. Efa indroa voafidy depiote ny tenany ary tanatin’ny antoko TIM hatrany. Ary nandritra iny fotoam-piasana farany iny aza dia izy no filohan’ny vondrona parlemantera TIM. “Vavolombelona izany nahavoatendry ahy ho filohan’ny vondrona parlemantera fa natokisana aho. Nahazo fahatokisan’ny depiote namana ary indrindra nahazo fatokisan’i Marc Ravalomanana filohan’ny antoko Tim” hoy Randriamandimbisoa Félix Tsy vitan’ny nametrahana fitokisana ity mpanao politika ity nandritra ny fotoam-piasana fa mbola isan’ny nitarika ny hetsika rehetra. Tazana izy nandritra ny hetsika nafana tena amin’ny kianjan’ny 13 mey, hetsika notarihan’ireo depiote miisa 73 ka nahatonga niantsoana ny hetsika ho hetsika D73. Tazana saika isan’andro lohalaharana miaraka amin’ny vahoaka namakivaky dia antongotra ny tananan’Antananarivo avy any Anosibe ary mandalo an’Anosy hatreny amin’ny kianjan’ny 13 Mey. Tsiahivina fa depioten’ny boriborintany fahaefatra ny tenany.
Ankehitriny anefa raha milatsaka depiote izy dia anatin’ny lisitra Dinike. Nanaitra izany. Nohazavainy fa ny ao anatin’ny vondrona Dinike dia ireo niara-dalana tamin’ny Tim-K25 nandritra ny fihodinana faharoa tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika farany teo. “Tsy afaka mijanona anatin’ny antoko anjakan’ny kolikoly aho” hoy i Randriamandimbisoa Félix raha nanontaniana nahoana izy no tsy nijanona ao anatin’ny antoko TIM.
Raha hiverenana ny tantara dia nasiana fifanintsanana tao anatin’ny antoko Tim mba hanendrena izay ho kandida isaky ny fari-pifidianana, io ilay antsoina hoe primaire. Tsy lany tao amin’ny fari-pifidianana boriboritany fahaefatra ao Antananarivo-Renivohitra i Randriamandimbisoa Félix. Mba samy taitra avokoa izay nandre ny vokatra. Marihina fa tsy i Felix irery no tsy lany tamin’ireo depiote Tim nandritra izany fifanintsanana izany. Misy tamin’ireo tsy lany ireo no nijanona anaty antoko Tim, ao ireo nilatsaka na anaty vondrona politika vaovao na nirotsaka amin’ny anaran’ny tenany (indépendant hoy ny fiteny mahazatra).
Raha ny momba ny tsy nahalany an’i Randriamandimbisoa Félix manokana dia nahitsy ny fanazavan’ity mpanao politika ity. “Nanjakan’ny kolikoly ny fifidianana fanendrena ny kandida tao anaty antoko” hoy Randriamandimbisoa Félix Marie Louis Nosoritany fa tsy nampoiziny mihitsy izany tranga izany. Notambazana vola 50 000 ariary ny mpifidy 60 ka ny antsasany nomena alohan’ny fifidianana ary ny antsasany raisina aorian’ny fifidianana. Nampitahorina koa izy ireo raha sanatria tsy mandresy ny mpanome vola. Nambaran’i Randriamandimbisoa Félix tamin’ny mpanorina ny antoko izany zava-nisy izany fa tsy nisy fanapahan-kevitra hanova ny vokatra na fanasaziana. Nahatsiaro ny hetsika nataony i Randriamandimbisoa Félix ka nanapa-kevitra tsy hanaraka ny fitsipiky ny antoko ary nirotsaka amin’ny lisitry ny vondrona Dinike. “Tsy afaka mijanona anaty antoko hanjakan’ny kolikoly aho” hoy Randriamandimbisoa Félix hentitra nanazava ny safidiny.
Nanomboka teo dia mitety ireo vahoaka i Randriamandimbisoa Félix manazava izany safidiny izany. Miezaka maka ny fon’ireo olona sahiran-tsaina manoloana izany toe-javatra izany. Mila mahay mandresy lahatra i Randriamandimbisoa Félix. Tsapa ho sahiran-tsaina ny vahoaka. Io adin’ny samy zanak’i Dada io izao no mameno ny tambazotra sosialy. Tena mavaivay ny teny ifanakalozana. Sahala amin’ireny mpifankatia nisaraka ireny e. Mandritra izany fotoana izany dia mitazana fotsiny ireo kandida mpifaninana, mibitaka mihitsy azy ary mandrangitra. Toa manao hoe : “Aleo hifanintsana sy hifandreraka eo ireo”. Tsapa miasa mafy i Randriamandimbisoa Félix Marie Louis tsy ankijanona ny fitetezany an’ireo fokontany sy ny sokajin’olona toy ny mpanasa lamba. Mizara fitaovana toy ny kovety ho azy ireny. Mbola tsy ao anatin’ny fampielezan-kevitra isika izao. Azo antoka fa hafana araka izany ny fampielezan-kevitra ao amin’ny boriborintany fahaefatra, indrindra mandre ny fanakanana ankolaka ataon’i Marc Ravalomanana tsy ampiasa ny hira faneva na ny anarany. Atao ahoana ny hanafoana ny lasan’ireo mpitolona mafana fo ireo izay nisalotra ny akanjon’ny TIM ary nisotro ny aleoko maty tamin’izany fotoana izany ankehitriny natao anjorom-bala ? “Sao mba diso adva ary ireo” hoy ny mpitazana ! Mankaiza? Mizotra amin'ny faharesena raha izao zotra arahana izao.
Samia velon’aina hanaraka ny tohiny.
Présidentielles 2018 : Moscou à la manœuvre à Madagascar - il y a 1 jour
Airtel Madagascar : Eddy Kapuku, nouveau DG, s'installe aux commandes - il y a 2 jours
Tontolo politika : “Tsy afaka mijanona anaty antoko hanjakan’ny kolikoly aho” hoy Randriamandimbisoa Félix - il y a 6 jours